Maaamulka Budhcad-badeeda Puntland Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday Saraakiil Maamulka Somaliland Iyo Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Aamustay | Araweelo News Network (Archive) -
Maaamulka Budhcad-badeeda Puntland Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday Saraakiil Maamulka Somaliland Iyo Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Aamustay
Garoowe(ANN) Maamulka Goboleedka lala xidhiidhiyo Budhacad-badeeda ee Puntland oo xaruntiisu tahay Garoowe ayaa xukuno kala duwan ku riday saraakiil maamulka Somaliland ah oo dhawaan ay ka afduubeen duleedka Degmada Taleex kadib markii malayshiyo Puntland ahi weerartay wefdi Somaliland ah oo halkaa marayay xiligaa.
Maxkamadda darajada koowaad ee Magaallada Garoowe ee maamul goboleedka lala xidhiidhiyo Budhcad-badeeda ee Puntland ayaa maanta xukuno kala duwan oo xadhig ah ku riday sadex masuul oo ka tirsanaa maamulka gobolka Sool. Kadib markii lagu eedeeyay inay kusoo xad gudbeen waxay ugu yeedheen dhul aanay lahayn.
Maxkamadda ayaa sheegtay inay xukun dhan toban sanadood oo xadhig ku riday sadexdan masuul oo kala ahaa Xeer Ilaaliyihii Gobolka Sool Siciid Cabdi Cali Shire, Guddoomiyihii Maxkamada Degmada LaascaanoodSalaad Ismaaciil Maxamuud iyo Garsoore ka tirsan maxkamada gobolka Sool oo lagu naanayso Fayfle. Waxay maxkamadda mamaamul goboleedka lala xidhiidhiyo Budhcad-badeeda ay dib jeelka ugu celisay oo aanay xukumin Guddoomiyihii waxbarashada gobolka Sool Maxamed Cali Cartan.
Maxkamada Garoowe waxa kale oo ay xukun shan sanadood oo xadhig ah ku riday afar askari oo masuuliyiintan ilaalo u ahaa. Waxa kale oo ay sheegtay in dawlada Majeerteeniya ay la wareegtay laba baabuur oo ay lahaayeen Garsoorka gobolka Sool.
Madaxweyne Ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Cabdisamad Cali Shire oo ka hadlay xukunkan ayaa sheegay inuu yahay mid cadaalad ah waxaanu masuuliyiintan ku tilmaamay kuwo khaa’inul wadaniyiin ah oo dhul Puntland ah uga adeegayay wax uu ku tilmaamay cadowga dalkiisa. Hase yeeshee xukuumadda Somaliland ayaan weli jawaab ah ka bixin xukunka muwaadiniinta u dhashay Somaliland ee maamulka Garoowe ku rideen xukunka. Kadib markii dhowaan laga afduubay duleedka Degmada Taleex oo ka tirsan Gobolka Sool, iyagoo qayb ka ahaa wefdi uu hogaaminayay Saleebaan Cali Koore oo ka tirsan xildhibaanda Somliland ee laga soo doorto gobolka Sool.
Xukuumadda Somaliland ayaa markii falkaa afduubka ahi dhacay jeedisay hanjabaado ka dhan ah maamulka Garoowe, iyadoo ay wasiirka Warfaafinta Somaliland Axmed Cabdi Xaabsade iyo wasiirka Gaashaandhiga Somaliland labaduba weedho hanjabaad ah u jeediyeen maamulka Garoowe, taas oo la xidhiidhay falkaa ay ku kaceen ee afduubka ahaa